चर्चित नायिका शोविता सिम्खडा जोगी भइन्! किन लागिन् ओशो मार्गमा शोविता? – Hamro24News
चर्चित नायिका शोविता सिम्खडा जोगी भइन्! किन लागिन् ओशो मार्गमा शोविता?
July 20, 2021 adminLeaveaComment on चर्चित नायिका शोविता सिम्खडा जोगी भइन्! किन लागिन् ओशो मार्गमा शोविता?
एक समयकी चर्चित नेपाली नायिका शोविता सिंखडा अहिले सन्यासी भएकी छिन् । उनी ओशो तपोवनमा स्वामी आनन्द अरुणको सानिध्यमा ध्यान गर्छिन् । दुई बर्षदेखि चलेको यो सिलसिला चलचित्र क्षेत्रको चमक धमक भन्दा उनलाई प्रिय लाग्ने गरेको छ । उनी एकाएक कसरी बनिन् सन्यासी? यसको पनि एक रोचक कारण छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
केही समय अघि सोविताले फेसबुकमा स्वामी आनन्द अरुणलाई सम्बोधन गर्दै एक लामो स्टाटस लेखेकी थिइन् । उनी त्यहाँ लेख्छिन्, आदरणीय बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणज्यू प्रणाम । थाहा छैन हजुरसँग पहिलो भेट कहाँ र कहिले भयो त्यो पहिलो भेटको स्मरण मसँग छैन तर यति भने पक्कै थाहा छ हजुरलाई भेट्दा म बालकै थिए । ओशो संन्यासीको घरमा जन्मदिन पाउनु नै मेरो अहोभाग्य होकि मैले मेरो चेतनाको विकासक्रममै सद्गरु ओशोको बारेमा बझ्ने, जान्ने र सुन्ने दुर्लभ अवसर पाएँ । अहिले पनि बालापनतर्फ फर्केर हेर्दा आफूलाई बडो भाग्यशाली महसुस हुन्छ ।
उनको माथिको कथनले पनि उनलाई केले सन्यासी बन्न प्रेरित गर्यो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अहिले त सोविताको सेरोफेरो नै ओशो तपोवन भएको छ । उनी त्यहाँ ध्यान गर्छिन्, प्रवचन सुन्छिन्, भक्ति साधनामा लीन हुन्छिन् । आध्यात्मिक विमर्श गर्छिन् । आफैंमा मग्न हुन्छिन् ।
बिहान सबेरै उठ्छिन् । शरीर शुद्ध गर्छिन् । ६ बजेदेखि , डाइनामिक मेडिटेशन शुरू हुन्छ । सक्रिय ध्यान साढे सात बजेसम्म जारी रहन्छ । अनि पालो योगको, त्यसपछि प्रवचन गर्दा साढे नौ बज्छ ।
बिहानको नास्ता तयार हुन्छ । ११ बजेबाट पुनः ध्यान शुरू हुन्छ । अनि दिवा खाना । खानपान सात्विक हुन्छ । खानपानपछि उही क्रम शुरू हुन्छ, ध्यान, योग, प्रचवन । उनको दिनचर्या दुई वर्षदेखि यस्तै वितेको छ । उनी यसैमा रमाएकी छिन् ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
प्रचण्ड र माधव नेपालविरुद्ध ओली समर्थकको ‘बाँदर जुलुस?
देउवालाई एमालेबाट २३ मात्रै नभई ३५ भन्दा बढी सांसदले मत दिने?